Nandray loka amin’ny tenindrazana iraisampirenena ny fandraisana an-tanana Activismo Lenguas ao amin’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Natolotra ny loka ho fankalazana ny Andro-Iraisampirenena-ho-an'ny-Tenindrazana fanao isa-taona (IMLD)
Voadika ny 24 Febroary 2021 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, polski, Română , عربي, বাংলা, Dansk, Ελληνικά, Nederlands, українська, Türkçe, Português, bahasa Indonesia, नेपाली, Yorùbá, Esperanto , Filipino, 日本語, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, русский, English
Pika avy amin'ny horonantsarin'i Shahedul Khabir Chowdhury tao amin'ny lanonan'ny Lokan'ny Tenin-drazana notontosaina tao Dhaka, Bangladesh tamin'ny 21 Febroary 2021.
Ny International Mother Language Institute (IMLI) ao Bangladesh no nanome loka ny fisantarana andraikitra Activismo Lenguas (Fikirizana An-tsivalo amin'ny Fiteny) an'ny Rising Voices loka (International Mother Language=Tenin-dRazana Iraisampirenena) taona 2021, ho fankasitrahana amin'ny “fijoroana miavaka mankany amin'ny fiarovana, fampiroboroboana ary fanomezana hery indray ireo fitenin-tompotany” avy amin'ilay tetikasa.
Atoa Sheikh Hasina, Praiminisitry ny Repoblika Entim-Bahoaka an'i Bangladesh sady Lehibe Mpiahy ny IMLI, no nanolotra ny loka tao amin'ny lanonana kely notontosaina tao Dhaka, Bangladesh tamin'ny 21 Febroary 2021.
Izao no taona voalohany nankatoavan'ny IMLI olontsotra sy fikambanana miisa efatra, na eo amin'ny sehatra manerana ny firenena na eo amin'ny sehatra iraisampirenena, noho ny asan-dry zareo mifandraika amin'ny fiteny. Nomena ny loka ho fahatsiarovana ny Andro Iraisampirenena amin'ny Tenindrazana [mg], izay tandremana manerantany amin'ny 21 Febroary hatramin'ny namoahana azy tamin'ny taona 1999. Masontsivana amin'ny fahazoana loka isaky ny roa taona ny “ny fandraisana anjara manokana mankany amin'ny fihavaozan'ny teknôlôjia an-tsivalo mitodika any amin'ny fikojakojana, fiarovana sy fameloma-maso indray ny fitenin-drazana.”
Ny sampan'ny Global Voices misahana ny fidinana eny an-kianja sy ny fampiatiana an-tsivalo, Rising Voices, no namoaka ny fisantarana andraikitra mifantoka manokana amin'i Amerika Latina tamin'ny taona 2014 antsoina hoe Activismo Lenguas, taorian'ny Fivoriana voalohany mpikatroka an-tsivalo [nomerika] ny fiteny tompotany notontosaina tao Oaxaca, Meksika, izay naha-mpiara-manomana ny Rising Voices. Hatramin'izany fihaonana fanombohana izany, nisy ny fivoriana mitovy amin'izany notontosaina tao Colombia, Però, Bolivia [mg], Ekoadaoro [mg], Goatemalà ary Chile, ka ny tanjona amin'izany dia ny hananganana tahaka sy tambajotra ifampianarana sy ifanakalozana. Ankoatra ireny lanonana ireny, notohanan'ny Rising Voices ireo tetikasam-pikatrohana an-tsivalo amin'ny firenena efatra, notarihany ny tetikasam-pikarohana fandraisana anjara miisa roa, natsangany ny zotra an-tserasera amin'ny tetikasa an-tsivalo, nampivoriana ny Mpikatroka an-tsivalo amin'ny tambajotram-piteny tompotany, ary natsangana ny fanentanana media sosialy @ActLenguas mbola mandeha amin'izao fotoana, izay ifandimbiasan'ny mpikatroka ao amin'ny fiteny tompotany itantaran-dry zareo ny zava-niainany amin'ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fikajiana ny fiteny.
“Izao loka izao no vavolombelona amin'ny fiantraikan'ny mpikatroka ara-piteny manerana an'i Amerika Latinina sy ny halehiben'ny otrika hovononina amin'ny asany,” hoy i Eddie Avila talen'ny Rising Voices. “Amin'ny alalan'ny fampakarana avo ny fahefan'ny aterineto sy ny teknôlôjia an-tsivalo [nomerika], nasehon'ireny mpikatroka ireny ny fahefan'ireny fitaovana ireny hanintonana taranaka mpiteny vaovao hananan'ny fitenin-dry fijoroana anjotra mivelatra kokoa. Manaiky ity loka ity izahay amin'ny anaran'ireo mpikatroky ny fiteny vazimba teratany anjatony sy ny vondrom-piarahamoniny, izay nizara ny fahalalàny midadasika sy ny haizatrany tamin'ny hafa ka nahatonga ity hetsika ity ho azo atao. Manantena izahay ny mbola hanohy amin'ny fanohanana azy ireny amin'izao fizorana mankany amin'ny Taompolo Iraisampirenena amin'ny Fiteny Tompotany amin'ny taona 2022 izao.”
Samy nahazo loka tamin'ity taona 2021 ity ihany koa ny Profesora Mohammad Rafiqul Islam sy Mathura Bikash Tripura avy ao amin'ny Jabrang Welfare Association of Bangladesh. Nahazo loka avy amin'ny sehatra iraisampirenena i Islaimov Gulom Mirzaevich, fanta-daza tamin'ny asany amin'ny fiteny Ozbeka.